Ogadentoday Press » Siyaasadda Oromo Iyo Qaddiyadeena!
Asmara-Waftiga Madaxweynaha Oromiya Lema
OTP- Madaxweynaha Maamulka Oromiya Lema Magarsaa Iyo Wafti uu la socda ayaa Asmara ku suggan si ay ula hadlaan Madaxda mucaaradka Oromia Daud Ibsaa oo saldhigiisu yahay Asmara. Fikirka ay aaminsan yihiin ayaa ah in guud ahaan Oromo midoobaan isla markaasna Oromo ay maamul xooggan 100 sanno ee socota Itoobiya ku haysato.
Xogaha dhabta ahi waxay xaqiijinayaan in Ganacsato Soomaali ah Iyo Siyaasiyiin waxay xalay lacag dhan 1 Million dollar siiyeen ninka caanka ah ee Jawaahir Mohamed si wadda haddaladii bilaabmay ee ONLF Iyo Itoobiya loo bur-buriyo iyaguna sidaas xukunka ku qabsadaan waana qorshaha dhabta ah ee ka danbeeya weerarkii lagu qaaday Jigjiga si howshan loo filiyo isla markaasna looga maarmo wadda haddal lala gallo ONLF. Jawaahir Mohamed oo in muddo ah ONLF iyo isagu maamulkii Tigreega ka soo wadda horjeedeen wuxuu gabi ahaanba daaqada ka saaray nidaamkii ahaa la dirirka cadaadiska wuxuuna hadda rabbaa in cadaadis balaadhan lagu sameeyo Soomaalida iyagoo loogu gabanayo waxaan meesha ka saaraynaa Maamulka Cabdi oo xasuuq Soomaalida u keenay! arrintan waxaa si weyn ugu faraxsan dad Soomaali ah oo si gaar ah dannahooda oo kali ah dhaqaale iyo hanti inay maamul ku yeeshaan u rabba. Maamulka Cabdi innuu dhibaato sameeyay shaki kuma jiro gaar ahaana ONLF ku sameeyay isagoo burburiyay ciidamadii ONLF!
Haddii Dr.Abiye Iyo Lema daacad ka yihiin dan Soomaaliyeed waxay miiska la fadhiisan lahaayeen ONLF kaddib xalka dalka ayay raadin lahayeen laakiin waxa dhabta ah ay doonayaan ayaa ah in cid walba oo u arkaan inay fahansan tahay ay ka boodaan!
Caqliga Soomaalida ee ah is burburiya waa midda meeshaas dhigtay waana mida u baahan xal haddaan loo helina in baddan tallada waa la raadin! Maamulka Cabdi haddii Tigree u shaqayn jiray haddana ma waxaan sugnaa Maamul Oromo u shaqeeya! Jawaabta waxaan ooga tagayaa Shacabka! Haddii maanta arrintan si weyn looga fiirsan waayo waa arrin noqon doontaa Taariikh aysan mar walba Maamuladda Kalle ee Itoobiya qabin!
Shacabku waa awoodda waxaana idin caddaynayaa maanta Shacabka kalle ee Itoobiya sida iskugu duuban yihiin, Guud ahaan Soomaalida deggan Dalka beel walba waxaa laga doonayaa innay midaas xaqiiqsadaan dhexdooda isku tanaasulaan haddii midaas aan la helin kolba beel ayaa la caleemo saari kadib markaa lagu dangaadho iyadoo adda dakano ah ayaa la eryan!
Fikir ahaan waxaan aaminahaya in Dhamaan ummada Dalku, Siyaasiyiinta Dalku, Culumowdiinka, Odoyaasha wadda hadlaan isla markaasna Masiirkan caruurtooda iyo mustaqbalkooda ka tashadaan meel la iskugu yimaado!
Midnimo Iyo Iskutashi ayaa lagu gaadhaa Awood Iyo Dadnimo!